Sinnaanta ragga iyo dumarka ee xagga shaqada iyo waxbarashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda Sinnaanta Ragga & Dumarka Maria Arnholm. Sawirle: Jessica Gow /TT
Sinnaanta ragga iyo dumarka ee xagga shaqada iyo waxbarashada
La daabacay torsdag 13 februari 2014 kl 12.51
Macallimiinta dalka ayaa laga dayrinayaa in aysan qaban hawl ku filan sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen shahaadooyinka ay wiilasha ardayda ahi ku qaataan waxbarashada. Waxaa kaloo soo ifbaxay in loo baahan yahay hawlo dheeraad ah oo loogu jiidanayo rag badan in ay ku soo biiraan shaqooyinka ay dumarku u badan yihiin. Sidaasna waxaa sheegay Svend Dahl oo natiijadii baaritaan loogu magacdaray ”Ragga iyo sida ay u arkaan sinnaanta ragga iyo dumarka oo ay horay dowladdu ugu xilsaartay maanta u gudbiyey wasiiradda sinnaanta ragga iyo dumarka Maria Arnholm.
Ujeeddada laga lahaa ayaa ahayd in baaritaan lagu sameeyo si wax looga ogaado arrimaha la xiriira ragga iyo aragtida ay qabaan sinnaanta ragga iyo dumarka. Baaruhuna wuxuu baaritaankiisa culeyska ku saaray xaaladda waxbarashada dugsiyada halkaas oo ay ka muuqato in gabdhuhu ay waxbarashada kaga wanaagsan yihiin wiilasha.
Haddaba waxaa muuqata in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeraad si ay wiilal iyo rag badani u doontaan waxbarashooyinka ay badanaaba gabdhuhu dhigtaan. Baahida taas loo qabana waxaa keentay in shaqooyinkii wershaha oo ay raggu ku badnaayeen ay soo yaraadeen iyo in baahi weyni ka jirto shaqooyinka dumarkuk u badan yahay.